Waa maxay NFT? Farshaxanka Internetka oo aad looga taajiray (Layaabkii dunida) - Muraayad
Home Aragti-doon Waa maxay NFT? Farshaxanka Internetka oo aad looga taajiray (Layaabkii dunida)
Inta aynaan ka hadlin farshaxanka internetka, bal aan fiirino farshaxanka adduunka soo jiray oo la taaban karo.
Farshaxanka gacanta lagu sawiro ayaa qiimo ka leh suuqyada adduunka lagu kala iibsado farshaxanka (Artworks). Farshaxannada ayaa badanaa lagu soo bandhigaa Matxafyada adduunka. Farshaxanka ugu qiimaha badan adduunka waa sawirka Mona Lisa, waxaa sawiray artistaha ugu caansan adduunka oo lagu magacaabo Leonardo da Vinci.
Sawirkan Mona Lisa waxaa la sameeyay qiyaas ahaan in ka badan 600 oo sano. Waxaa 1962-dii lagu qiimeeyay 100 million oo dollar, haddii qiimahaas is celcelis iyo sicirka is beddelay loo fiiriyo lacagtaas ayaa 2021 gaaraysa 860 USD.
Mona Lisa, waxaa uu suranyahay matxafka Louvre ee maagalada Paris ee wadanka Fransiiska.
Waxaan hadda fahanay qiimaha uu yeelan karo Farshaxanka caadiga ah, aan haddana u guda galno farshaxanka internetka ah.
Waa maxay Farshaxanka Internetka loo yaqaano NFT?
NFT waxaa laga soo gaabiyay “Non-Fungible Token” waxaana isku dayaynaa in aan sharaxno micnaheeda guud. Si aan u fahanno waxaan soo qaadanaynaa tusaalaha lacagta.
1000 – Kun shillin oo Soomaali ah wuxuu ku qiimo yahay, u egyahay, la egyahay, isku taabasho yihiin isku wax ka samaysan yihiin kun shillin kale oo lacag Soomaali ah. Sidaas darteed wax u gaar ah ma jiraan.
NFT – Farshaxanka NFT ayaa ah hanti gaar ah oo aan jirin wax u eg ama la eg. NFT waxaa noqon kara alaab gaar ka ah wax walba oo kale. Waa in ay kaligeed adduunka ka jirtaa.
NFT – Waxay leeyihiin Numbaro u gaar ah mid walba, waxaana lagu kaydiyaa “Blockchain” oo ah system aan la jabsan karin, la badali karin, oo loogu talo galay in uu jiro waligiis.
Hantida NFT ayaa qiimaheedu ku xiranyahay in aanan jirin wax la mid ah, oo ay yihiin hanti asal ah, waxaana lahaanaya qofka iibsaday oo kaliya.
Hantida online-ka ee NFT ayaa waayahan kusoo badatay (Virtual World) dunida ku dhisan internetka.
Waxaa bilaabatay in NFT ahaan loo iibiyo muuqaalo, sawirro digital ah, qoraallo iyo wixii la mid ah oo (Unique) wax la mid ah jirin. Waxaana ka mid ah, wax yaalahan hoos ku xussan:
Everyday 5000 days: Waxaa lagu iibsaday 69 million oo dollar
Waa sawir ka kooban 5,000 sawirrood oo la isku geeyay. Waxaa lagu iibsaday lacag dhan 69 million oo dollar ah, waxaana uu noqday sawirkii ugu horreeyay oo digital ah oo lacag intaas la eg lagu kala gatay.
Qoraalkii ugu horreeyay ee Twitter: 2.9 Million dollars
Farshaxanka Internetka ee NFT collectibles waxaa sidoo kale lagu gatay qoraalkii ugu horreeyay abid ee lagu daabacay barta Twitter-ka
Waxaa daabacay Jack Dorsey oo ah ninkii abuuray Twitter. Wuxuu sanadkaan ku iibiyay suuqa xaraashka (Auction) ee NFT lacag ku dhaw 3 million oo dollarka maraykanka ah.
Qoraalka ayaa sidan ah “Waxaan samaynayaa twitter-kayga”
Cryptopunk 3100: 7.58 Million Dollars
Cryptopunk waa farshaxankii ugu horeeyay ee internetka NFT
Soomaaliyeey ha ila yaabina markaan idin iraahdo, sawirkan aad arkaysaan ayaa waxaa lagu iibsaday lacag ka badan 7 million iyo bar doollarka maraykanka.
Sawiradan ayaa waxaa soo saaray ama sameeya numberada uu ku shaqeeyo (Ethereum Blockchain) systemka keydiyo numberada lacagta Ethereum (Ethereum waa lacagta onlineka ee qiimo ahaan ku xigto Bitcoin)
Charlie bit me: Youtube video – $760,999
Waa fiidiyoo barta youtube lagu daabacay 14 sano ka hor, waxaan filaayaa in ay Soomaali badani arkeen, waxaa dhowr casho ka hor laga dhigay hantida NFT waxaana lagu kala iibsaday $760,999 oo doollar. Waxaa mar dhaw laga saari doonnaa barta youtubeka oo ay daawadeen dad gaaraya 884 million.
Khriste, ka waran sheekadan iyo halka uu adduunka ula socdo aalada internetka. Ma haysataa hanti aa ka dhigtid Farshaxanka NFT?
Previous articleCOVID19 iyo awoodaha baasaboorada Geeska Africa. Yaa hadda ugu sarreeya?
Next articleNin Soomaali ah oo waddan dhan Muslimiyay (si layaab leh)